Izixhobo ezikhethiweyo - iSuzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Umgangatho wokuthembeka: Izixhobo zinokuzinza ngexesha, okanye ngaphakathi kwexesha elithile, hayi nakuphi na ukubakho kweengxaki.
Izinto eziphathekayo: Izixhobo zeGearbox zisebenzisa i-20 Cr-Mn alloy, izinto ziphucula ukunganyangeki kwemveliso, nazo ziqinisekisa ubunzima.
Ukuchaneka: nasekuqiniseni machining → ukusulungekiswa thermal → ukusebenza ngetsimbi → Carburizing → izixhobo besila, ukuphucula kakhulu ubomi amaxesha 5-10.
Ukomelela: Ukuthathela ingqalelo impembelelo yezixhobo zezitena zomsebenzi wefektri, ke ngoko ukwanda kwento yokhuselo loyilo lwamaxesha ama-1-2.
Ulwakhiwo: kuyilo lolwakhiwo, njengokukhupha amandla e-axial extrusion ngokusebenzisa umkhono wokuthwala i-sleeve roller, emva koko usasazeke kwiyunithi yesiseko, isenza umshini we-extrusion spindle ngaphandle kwamandla e-axial, kuphela ngamandla e-radial.
Ukulula: Njengeekhamera zokudubula zaseJapan, wonke umntu unokuzisebenzisa.
Ukusebenza kweendleko: Ukujonga ngokupheleleyo amandla-ngendlela efanelekileyo, indlela yokutyala imali kwindawo enye, ukwandisa imveliso ngelixa unciphisa amandla kunye nezinye iindleko zemveliso.
Inkqubela phambili: Inkqubo yeRobot inokuthenjwa, iyaguquguquka kwaye ilungele.
Inkqubo yamaqondo obushushu, ukothula inkqubo kunye nokupakisha izitena ezibomvu, ukunciphisa ukusebenza.
Inkonzo: Izixhobo ezikhethiweyo kufuneka zithathele ingqalelo ubonelelo lwabanikezeli beenkonzo emva kwenkonzo kunye nenkqubo yenkonzo, yomelele emva kwenkqubo yokuthengisa exhasa izixhobo ezinokuthenjwa.
► impendulo kwangexesha ► iinkonzo zobungcali ► iiradiyasi yenkonzo ► inkonzo yokumisa kanye
Umxholo wenkonzo: ukunciphisa iingxaki zabo, izinto ezincinci zento, ngenxa yeenkonzo zabo, ngalo ndlela ukunciphisa ixesha, ukusondela, ukunciphisa iindleko, kunye nokunciphisa iindleko, ukuphucula imveliso yomsebenzisi, kunye neenkonzo zebrendi.
Ukukhetha: Inkqubo efanelekileyo yokukhetha izixhobo ezifanelekileyo, akukho luhlobo lwezixhobo ezifanelekileyo kuzo zonke iinkqubo.
Izinto ezahlukileyo izitena eziluhlaza ezahlukileyo Indlela eyahlukileyo yokufumba kwi-auger eyahlukileyo
Isikali esijijwayo somhlaba esahlukileyo Isantya esijikeleziswa ngeendlela ezahlukeneyo ngombane ohlukeneyo amandla ahlukeneyo
Khetha isityalo esahlukileyo sokwenza izitena